कसको भरमा विश्वासको मत लिँदैछन प्रधानमन्त्री ओली ? « Postpati – News For All
कसको भरमा विश्वासको मत लिँदैछन प्रधानमन्त्री ओली ?
बैशाख २०, काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास मत लिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आइतवार गराएपछि जसपा यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो ।
जसपा कार्यकारिणी समिति सदस्य केशव झाले ओलीलाई विश्वासको मत दिने प्रस्ट पारे । तर आफूहरूले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गरेपछि मात्रै विश्वासको मत दिने शर्त अघि सारिएको उनले बताए ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेता अशोक राई समूह ओली सरकारलाई समर्थन नदिने अडानमा छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन र सरकारमै जसपा नेता सहभागीदेखि संघीय सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर पार्टीभित्र २ समूह निर्माण भएको छ ।
प्राविधिक रूपमा सरकार बहुमतमा रहे पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । पदमा कायम रहन प्रधानमन्त्रीले १३८ सांसदको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ ।
२७५ सदस्यको प्रतिनिधिसभामा एमालेको १२१ सिट छ । कांग्रेसको ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९ (पार्टी छाडेका ४ पदमुक्त भएपछि), जसपाको ३४, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको १/१ सिट रहेको छ । कांग्रेसका २ र जसपाको २ सांसद निलम्बित छन् ।
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सम्भावना समेत बढेको चर्चा पार्टीभित्र जारी छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।